Emile Heskey oo kula taliyay Jadon Sancho kooxda ay tahay inuu ku biiro – Gool FM
RASMI: Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay xiddigeeda da’da yar ee Bukayo Saka
RASMI: Mario Gomez oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo difaac kala soo saxiixatay naadiga PSG.… + SAWIRRO
Emile Heskey oo kula taliyay Jadon Sancho kooxda ay tahay inuu ku biiro
(Yurub) 26 Mar 2020. Xiddigii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ee Emile Heskey ayaa kula taliyay laacibka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee reer England iyo naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho inuu ku biiro safka Reds marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga soo socda.
Jadon Sancho ayaa u dhaliyay kooxdiisa Borussia Dortmund 16 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 18 gool kale, 34 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigtay inuu soo jiito indhaha kooxo badan oo Yurub ah.
Haddaba Emile Heskey ayaa wareysi uu bixiyay, waxaa soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka England waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Markaad fiiriso da’ada Jadon Sancho, mar walba wuxuu ku haboon yahay kooxda Liverpool”.
“Markaad fiiriso safka hore ee Liverpool, waxaad ka heli kartaa Mane iyo Salah oo gooldhaliyayaal ah, waana mida saxda ah oo ay labadan xiddigba si fiican u sameynayaan.”
“Sancho wuxuu leeyahay tayada lagu soo galo kooxda, laakiin aad ayey u adkaan doontaa inuu si joogta ah u ciyaaro iyadoo lagu xisaabtamayo xiddigaha Salah iyo Mane”.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in 20 jirkan lala xiriiriyay inuu ku biirayo kooxaha Liverpool iyo Manchester United, wuxuuna qandaraaska uu kula jirro Borussia Dortmund uu dhacyo June 2022.